1606 Studio dia mankalaza ny faha-enina volana mahomby amin'ny asa ho an'ny BMW, UCSF Fahasalamana, Carl's Jr ary maro hafa. - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcaster ofisialy an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » 1606 Studio dia mankalaza ny faha-enina volana mahomby amin'ny asa ho an'ny BMW, UCSF Fahasalamana, Carl's Jr ary maro hafa.
1606 Studio dia mankalaza ny faha-enina volana mahomby amin'ny asa ho an'ny BMW, UCSF Fahasalamana, Carl's Jr ary maro hafa.
Ny studio studio dia manana efitrano fanitsiana efatra izay miasa amin'ny fahaiza-manao ary mikasa ny hampivoatra.
SAN FRANCISCO - Enim-bolana taorian'ny nanombohany, dia nahavita nanangana ny tranokala voalohany tamin'ny taonjato faha-100 tao amin'ny tanànan'i San Francisco, North Beach, ny mari-pahaizana famoronana famoronana. Vita ihany koa ny tetikasa namonoana an'ireo masoivoho Bay Area Goodby, Silverstein & Partner, DDB, BBDO, Duncan Channon, GTB, Argonaut, Novio sy ny hafa, ary marika toa ny Google, Facebook, LinkedIn ary Clifbar.
Natsangan'ny mpamokatra mpanatanteraka Jon Ettinger, tonian-dahatsoratra / talen'ny Doug Walker ary mpanatontosa Brian Lagerhausen sy Connor McDonald, 1606 Studio amin'izao fotoana izao dia misy efitrano fanitsiana famoronana efatra ary suite famaranana famokarana aorian'ny famokarana. Mikasa tsy ho ela ny hampiana efitrano fanovana fahadimy sy efitrano famaranana faharoa, ary koa suite graphic miisa roa.
Nilaza i Ettinger fa tsy maintsy niroso haingana ny orinasa mba hampandeha sy hampandehanana ny rafitra fanovana noho ny fidiran'ny tetikasa tonga tamin'ny fotoana nanombohany tamin'ny volana martsa. "Tena faly aho raha naseho tamina asa be dia be avy tany am-bavahady, avy tamin'ny olona efa niarahanay taloha sy mpanjifa vaovao," hoy i Ettinger. "Naneho fahatokisana be ho an'ny ekipantsika sy izay ezahinay."
Ny tetikasa vao haingana 1606 dia misy toerana vaovao ho an'ny BMW avy amin'i Goodby, Silverstein & Partners. Nosoratan'i McDonald, misy andiana BMW sedans izay voatazona manodidina ny hazakazaka ataon'ireo mpamily mitazona toromarika ny fony. Ny kisarisary dia mampiseho ny tsikombakombany amin'ny antsokosoko rehefa mihazakazaka sy mihodina ny fiara. "Fomba vaovao hanehoana ny fientanentanana mitondra fiara", hoy i McDonald. "Ny hamafin'ny fanontana dia manamafy ny hafatra amin'ny fahazoana haingam-pandeha sy haitao rehefa voadona haingana ny fon'ny mpamily."
Ny tetikasa farany an'ny Walker dia toerana iray amin'ny fampielezan-kevitr'i Novio "Redefining Possible" ho an'ny hopitaly Bay Area UCSF Health. Walker dia nanapaka faritra manodidina ny ampolony ho an'ny fampielezan-kevitra nanomboka tamin'ny 2016. Ilay vaovao dia mampiseho lehilahy iray mitaingina lalana miakatra an-tendrombohitra rehefa hariva. Rehefa miditra amin'ny fakantsary izy dia hita fa manana tongotra prostitu izy. Ny UCSF Health dia mitantana programa fanofanana feno ho an'ny amputees. "Fanentanana mahafinaritra ny ifaneraserana," hoy i Walker. "Ny toerana tsirairay dia mitantara tantara lehibe amin'ny fomba tsotra nefa mahery vaika."
Ny tetikasa farany nataon'ny Langerhausen farany dia faritra ho an'i Carl's Jr mivoaka avy amin'i Erich & Kallman, izay vao nomena anarana hoe Agency Bebe Taona: Andrefana nataon'ny Advertising Age. Ilay toerana dia manolotra fanampin-tsakafo amin'ny talen'ny trano fisakafoanana, vovo-javamaniry vaovao lafo be, ny mpamaky ny feo dia mamaky azy io ho "$ 249.00" fa tsy "$ 2.49." "Mahaliana ny miara-miasa amin'ny ekipa mpamorona. , ”Hoy i Langerhausen. “Manana fomba fiarahamiasa mahery vaika izy ireo izay mifanaraka tsara amin'ny antsika. Manantena izahay fa hampody azy ireo amin'ny tetikasa ho avy. ”
Miandrandrana, manantena i Ettinger fa haharitra ny enim-bolana 1606. "Ny tanjonay dia ny hanome ireo masoivoho sy marika ny safidy mora sy mamorona amin'ny famokarana votoaty," hoy i Ettinger. "Manolotra fomba fiasa vaovao izay manaisotra ny sakantsakana amin'ny fiaraha-miasa famoronana izahay, ary miasa izy io."
Mpikambana mpanohana ny masoandro miakatra masoandro, Gail Fuller dia nantsoina ho loka mpitarika an'ny taona-taonany - Desambra 6, 2019
Ny Rising Sun-Rising dia nanolotra ny mari-pankasitrahana 2019 Export Awards avy amin'ny Australia - Desambra 5, 2019
Sound Lounge no manolotra Serivisy Podcast - Novambra 25, 2019
dokam-barotra Advocate Aurora Health Campaign / Ny Colonie Fampahalalam-baovao mivantana-sosialy Fampitana-SocialMedia Fampitana-SocialMeida dokam-barotra fanovana Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor SJGolden - Spears & Arrows The Colonie Ny Colonie - News THE COLONIE / Chicago	2019-08-13
Previous: Ny kolonely dia mahazo loka roa amin'ny telestialy ho an'ny fampielezan-kevitra amin'ny dokambarotra Porsche
Next: IBC2019: Manohana ny bokotra 4K ho an'ny Studio sy fampiharana amin'ny finday ny vahaolana vaovao Cobalt Digital Solutions Digital Cobalt.